Nnukwu data, nnukwu ọrụ: Olee otú SMB nwere ike isi meziwanye omume ahịa ahịa transperent | Martech Zone
Nnukwu data, nnukwu ọrụ: Kedu ka SMB nwere ike isi kwalite omume ire ahịa transperent
Data ndị ahịa dị mkpa maka obere azụmaahịa na nke etiti (Ndị SMB) iji ghọtakwuo mkpa ndị ahịa na otú ha si emekọrịta ihe na ika ahụ. N'ime ụwa asọmpi siri ike, azụmaahịa nwere ike ịpụ iche site n'itinye data iji mepụta ahụmịhe nke ahaziri iche maka ndị ahịa ha.
Ntọala nke atụmatụ data ndị ahịa dị irè bụ ntụkwasị obi ndị ahịa. Na na-eto eto na-eto eto ka ndị ọzọ transperent ahịa si n'aka ndị na-azụ ahịa na ndị na-achịkwa, ọ dịghị oge ka mma ileba anya otú ị na-eji ndị ahịa data na otu esi emeziwanye omume ahịa nke na-azụlite ntụkwasị obi na ndị ahịa ntụkwasị obi.
Iwu na-eme ka iwu nchebe data dịkwuo njọ
Steeti dị ka California, Colorado na Virginia emejuputala atumatu nzuzo nke ha maka otu azụmaahịa nwere ike isi nakọta na jiri data ndị ahịa. Na-abụghị US, Iwu Nchedo Ozi Nkeonwe China na EU's General Data Protection Regulation na-etinye mmachi na otu esi edozi data nkeonwe ụmụ amaala.
Na mgbakwunye, ndị isi egwuregwu teknụzụ ekwupụtala mgbanwe na omume nsochi data nke ha. N'ime afọ abụọ na-abịa, kuki ndị ọzọ ga-adịkwa mgbe ochie Google Chrome, Ntugharị na-eso ihe nchọgharị ndị ọzọ dị ka Safari na Firefox malitelarị igbochi kuki ndị ọzọ na-esochi. Apple ebidola itinye mmachi na data nkeonwe anakọtara na ngwa.
Atụmanya ndị ahịa na-agbanwekwa.
76% nke ndị na-azụ ahịa na-enwe mmetụta dịtụ ma ọ bụ nke ukwuu maka otu ụlọ ọrụ na-anakọta ma jiri data nkeonwe ha. Kedu ihe ọzọ, 59% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ọ ga-akara ha mma ịhapụ ahụmihe ahaziri onwe ha (dịka ọmụmaatụ, mgbasa ozi, ndụmọdụ, wdg) karịa ka ejiri ụdị akara nyochaa ọrụ dijitalụ ha.
Gartner, Omume kachasị mma nke nzuzo data: Otu esi arịọ ndị ahịa maka ozi n'oge ọrịa na-efe efe
N'ọdịnihu, anyị nwere ike ịtụ anya mgbochi ndị ọzọ iji chebe data nkeonwe. Ihe ndị a na-arụtụ aka na ọ dị mkpa iji nyochaa usoro ịzụ ahịa iji hụ na ha kwekọrọ na atumatu gọọmentị mana na-egosipụtakwa mgbanwe mgbanwe na atụmanya ndị ahịa.
Ozi ọma ahụ bụ na nchekwa data ndị ahịa aburularị ụzọ azụmaahịa maka ọtụtụ SMB.
55% nke SMB nyochara na data ọnụego US na teknụzụ nchekwa ozi dị oke mkpa maka ọrụ azụmaahịa ha, na-egosi nchegbu maka ichekwa data ndị ahịa. (Lee ala ibe maka usoro nyocha.)
GetAppNyocha gbasara teknụzụ kachasị elu nke 2021
Kedu ka azụmahịa gị si agwa ndị ahịa omume data gị? N'akụkụ a na-esote, anyị ga-ekpuchi omume kachasị mma maka ịzụ ahịa n'ụzọ doro anya nke na-enyere aka wusie mmekọrịta ndị ahịa ike site na ntụkwasị obi.
Ngwá ọrụ na ndụmọdụ iji kwalite omume ịzụ ahịa n'ụzọ doro anya
Nke a bụ usoro ole na ole ndị na-ere ahịa nwere ike iwere yana ngwa ọrụ iji mejuputa nke nwere ike inye aka melite omume ịzụ ahịa n'ụzọ doro anya.
Nye ndị ahịa njikwa karịa – Nke mbụ, ọ dị mkpa inye ndị ahịa mgbanwe maka otu esi achịkọta ma jiri data ha mee ihe. Nke a gụnyere ịnye nhọrọ nbanye na ọpụpụ maka ndị ahịa na-ekerịta data nkeonwe. Akụrụngwa ọgbọ nke ndu nwere ike ịbụ ngwá ọrụ bara uru site n'ikwe ka ị mepụta ụdị weebụsaịtị nke na-anakọta data ndị ahịa n'ụzọ doro anya.
kpakọrịta nke ọma ka esi echekwa data ndị ahịa - Kọwapụta nke ọma ka ị na-anakọta na iji data ndị ahịa. Kọwaara ndị ahịa ihe omume ị na-eme iji chekwaa data ha ma ọ bụ ọ bụrụ na a na-eme mgbanwe ọ bụla na otu esi echekwa ya. Ị nwere ike ime nke a site na iji ngwa ahịa ahịa niile na-ejikọta ozi gbasara nchedo data ndị ahịa na ojiji n'ofe ọtụtụ ọwa mgbasa ozi.
Nye ezigbo uru maka mgbanwe data - Ndị ahịa na-ekwu na ụgwọ ọrụ ego na-arata ha n'ọnọdụ maka data nkeonwe ha. Tụlee ịnye ndị ahịa uru a na-ahụ anya n'ọnọdụ maka data ha. Akụrụngwa nyocha bụ nnukwu ụzọ iji rịọ n'ụzọ doro anya na ịnakọta data maka mgbanwe ego.
53% nke ndị na-azụ ahịa dị njikere ikesa data nkeonwe ha maka mgbanwe ego yana 42% maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ efu, n'otu n'otu. 34% ọzọ na-ekwu na ha ga-ekekọrịta data nkeonwe maka mgbanwe ego ma ọ bụ coupon.
Na-emeghachi omume - Ịnabata arịrịọ ma ọ bụ nchegbu ndị ahịa ngwa ngwa na n'ụzọ doro anya ga-enyere aka wulite ntụkwasị obi, nzọụkwụ dị mkpa maka ahụmahụ ndị ahịa dị mma. Ngwa ndị na-enye akpaaka ahịa, nhazi onwe, mgbasa ozi ọha, email, na ọrụ nkata nwere ike inyere azụmahịa gị aka nke ọma ma na-anabata ndị ahịa mgbe niile.
Rịọ maka nzaghachi – Nzaghachi bụ onyinye! Nyochaa ka ụzọ azụmaahịa gị si arụ ọrụ site na ịgakwuru ndị ahịa gị ozugbo. Ịchịkọta nzaghachi mgbe niile na-enye ndị otu ahịa aka ịhazi atụmatụ dịka ọ dị mkpa. Ngwá ọrụ nyocha ahịa nwere ike inyere gị aka ịnakọta na nyochaa data mgbe ị na-enyocha ndị ahịa gị.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere atụmatụ maka teknụzụ gị
Dị ka m na-akọrọ n'elu, e nwere ọtụtụ ụzọ iji leverage ngwá ọrụ na-akwado transperent marketing omume, ma nanị inwe nkà na ụzụ ezughị. N'ime GetAppNyocha Azụmahịa Ọzụzụ 2021:
41% nke mmalite na-ekwu na ha emebebeghị atụmatụ maka teknụzụ ahịa ha. Kedu ihe ọzọ, mmalite ndị na-enweghị atụmatụ maka teknụzụ ịzụ ahịa karịrị okpukpu anọ nwere ike ikwu na nkà na ụzụ ahịa ha anaghị emezu ebumnobi azụmahịa ha.
Azụmahịa gị nwere ike ịmasị ma ọ bụ na-eji ọtụtụ ụdị ngwanrọ na-anakọta data yana soro ndị ahịa kparịta omume data. Iji mee ka teknụzụ kachasị mma wee hụ na ọ dị irè, ọ dị mkpa ịmepụta a atụmatụ teknụzụ ahịa ma soro ya.
Mgbe a bịara n'ịre ahịa n'eziokwu na nke doro anya, enwere ọtụtụ ihe dị n'ihe egwu - ntụkwasị obi, ntụkwasị obi ndị ahịa, na iguzosi ike n'ihe. Ndụmọdụ ndị a bụ mmalite iji kwadebe maka mgbanwe mgbanwe na nchekwa data mgbe ị na-eme ka mmekọrịta na ndị ahịa na-esiwanye ike.
Gị GetApp maka nlebanya ngwanrọ na nghọta ndị ọkachamara ga-enyere gị aka ịme mkpebi siri ike.
GetAppEmere nyocha teknụzụ kachasị elu nke 2021 site na Ọgọst ruo Septemba 2021, n'etiti ndị zara ajụjụ 548 n'ofe US, iji chọpụta mkpa teknụzụ, ihe ịma aka na usoro maka obere azụmaahịa. Achọrọ ndị na-aza ajụjụ ka ha tinye aka na teknụzụ ịzụta mkpebi na ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ 2 ruo 500 ma jide ọkwa nchịkwa ma ọ bụ karịa na ụlọ ọrụ ahụ.
GetAppEmere nyocha azụmaahịa azụmaahịa n'April 2021 n'etiti mmadụ 455 dabere na US iji mụtakwuo maka usoro ahịa na teknụzụ. A na-enyocha ndị zara ajụjụ maka ọrụ ime mkpebi na ahịa, ịzụ ahịa, ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa na ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ 2 ruo 250.
Tags: nzaghachi ndị ahịanzuzo nke ndị ahịannyocha ndị ahịantụkwasị obi nke ndị ahịaahịa datanchekwa data ndị ahịanzaghachi ndị ahịadataNchedo datagartnerdata gartnergartner nyochagetappGoogle chromeatụmatụ teknụzụ ahịaahia ahianyocha usoro ahịa ahịadata nkeonweahụmahụ ahaziri ahazipiisoro ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị
Meghan Bazaman bụ onye nyocha dị elu na GetApp, Ịkekọrịta nghọta gbasara teknụzụ ahịa na ngwanrọ na-apụta. Ọ gụrụ Mgbasa Ozi na Mahadum Texas dị na Austin ma nwee ahụmịhe na-ekpuchi teknụzụ, mgbasa ozi, ahụike na ecommerce kemgbe 2011. Tupu ịbanye GetApp, Meghan jisiri ike nyocha nyocha ahịa nke syndicated ma duzie atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya maka data na-eduga, nghọta na ụlọ ọrụ ndụmọdụ. O nwere nka puru iche n'ime nyocha nyocha, imepụta nleba anya data, na igosi ndị na-etinye aka na nghọta isi.
kwụ n'ahịrị-ya: Tinye oghere nchere nke ọma na webụsaịtị gị iji jikwaa ọnya okporo ụzọ dị elu